Famerenana amin'ny Android, inona izany? Fampianarana sy tsikelikely eto | Androidsis (Pejy 2)
Ahoana ny fomba hanatsarana tanteraka ny Xiaomi Mi4c, Root, TWRP Recovery ary Rom tanteraka amin'ny teny Espaniôla sy madio amin'ny junk Apps
Androany dia mampiseho horonantsary fampianarana telo izahay hahafahanao manatsara ny Xiaomi Mi4c hatramin'ny farany ambony. Ho hitanao eto ny fomba Root ny Xiaomi Mi4c, ny fomba fametrahana ny TWRP Recovery ary ny fametrahana azy amin'ny teny Espaniola tanteraka.
Ahoana ny fanavaozana ny TWRP Recovery amin'ny Lenovo K3 Note amin'ny endriny 2.8.6 style Design Material
Anio dia asehonay anao ny fanavaozana ny TWRP Recovery amin'ny Lenovo K3 Note hamela azy amin'ny kinova 2.8.6 miaraka amina Design Material tanteraka.
Ahoana ny fametrahana TWRP Recovery ary Root Lenovo K3 Note
Anio dia asehonay anao tsikelikely ny fomba hanonganana ny Lenovo K3 Note amin'ny fomba tsotra ary ao anatin'izany ny zavatra rehetra ilainao.
Anio dia asehonay anao ny fomba mora indrindra hanombohana indray ny terminal Android amin'ny maody fanarenana ary koa ny fomba famerenana hafa.
Anio dia asehonay anao ny Flashify, fampiharana manaitra izay hanampy anay hanafaingana ireo rakitra zip nefa tsy mila miverina amin'ny Recovery Mode ary koa safidy hafa tena tsara sy mahaliana.
Ahoana ny fametrahana TWRP modified Recovery amin'ny Samsung Galaxy S6 ary hamaka izany
Tutorial ho an'ny Root ary ampidino ny TWRP amin'ny Samsung Galaxy S6
Ahoana ny fametrahana TWRP Recovery amin'ny Xiaomi RedMi Note 4G, manan-kery ho an'ny Miui v5 sy Miui v6
Anio dia asehontsika anao amin'ny antsipiriany ny fomba fametrahana ny TWRP Recovery amin'ny Xiaomi RedMi Note 4G
Ny kinova TWRP 2.8.4 vaovao dia navotsotra niaraka tamin'ny fiasa vaovao, fanamboarana bibikely ary fanohanan'ny teratany ho an'ny Moto 360 sy LG G Watch R.
Amin'ny lahatsoratra na lesona manaraka dia asehoko anao fa mora ny manavao ny fanovana voaova amin'ny kinova farany misy
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina amin'ny Bq Aquaris 5,7 ″ (Tena mora)
Fampianarana feno miaraka amin'izay ilainao rehetra hametrahana ilay fanovana nohavaozina ao amin'ny bq Aquaris 5,7 ".
Ahoana ny fomba hanongorana LG G2 amin'ny Android 4.4.2 ary hametraka ny fanovana voaova
Eto ianao no manana ny fomba mora indrindra hametrahana Root the LG G2 amin'ny Android 4.4.2 hahafahanao mametraka ny TWRP Recovery, izany rehetra izany dia tsy mila mampiasa PC ary manan-kery ho an'ny maodely LG G2 rehetra.
[ZIP] Apetraho ny LG G3 Launcher amin'ny KitKat Android misy famerenana
Avy eo avelako ho anao ny zip ho an'ny fametrahana amin'ny fanamboarana novaina, ny LG G3 Launcher miasa tanteraka araka ny hitanao amin'ny horonantsary mifamatotra.
Eto ianao manana ny klavitry ny LG G3 hankafizanao amin'ny Android misy ny kinova 4.4.2 ary nanova ny Root sy ny Recovery.
Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader Moto E, hamaka ary hametahana fanarenana mahazatra
Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader Moto E, ROOT ary hametrahana fanarenana mahazatra
Ahoana ny fametrahana ny rindranasa Google zanatany raha tsy mila fanovana voaova
Eto ianao dia manana fomba iray izay hanampy anao hametraka rindranasa Google tera-tany toa ny Play Store nefa tsy mila manana fanarenana voaova.
Fampianarana iray isaky ny dingana iray izay asehoko anao ny fomba fiverenana amin'ny Android 4.2.2 amin'ny LG G2 hahafahanao manavao ny Android Kit Kat ary tsy hahavery ny Recovery.
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 ho an'ny Android 4.4.2 Kit Kat nefa tsy very ny fanovana voaova
Eto aho dia manome fampianarana anao hanavao ny LG G2 ho an'ny Android 4.4.2 Kit Kat nefa tsy very ny Root sarobidy na ny fanarenana nohavaozina.
Ny famoahana ny LG G2 Kit Kat Kernel ofisialy vaovao dia vaovao mahafaly satria tsy ho ela isika dia hanana ny fanarenana efa noheverina nandrasana hatry ny ela.
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova LG G2 rehetra
Eto ianao dia manana fitaovana ho an'ny Windows izay hanampy anay hametraka ny fanamboarana nohavaozina amin'ireo variana rehetra amin'ny LG G2.
Tsy mbola nisy toy izany mora foana ny manazava ny fanovana namboarina tamin'ny terminal Android anao noho ny fanampian'ny RecoverX.
Root sy Recovery amin'ny Nexus 4 Android 4.4 Kit Kat
Fampianarana an-dapa-dingana amin'ny zavatra rehetra ilainao amin'ny Root ny Nexus 4 amin'ny Android 4.4 Kit Kat.
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova amin'ny LG G2
Fampianarana iray dingana-dingana feno hametrahana ny fanovana voaova amin'ny LG G2 miaraka amin'izay ilainao rehetra.
LG Optimus G, ny fomba fametrahana ny fanarenana novaina
Fampianarana tsotra tsikelikely hametrahana ny fanarenana voaova amin'ny LG Optimus G amin'ny alàlan'ny fisintomana fampiharana maimaimpoana amin'ny Play Store.
Fampianarana miandalana mba hamongorana sy hametrahana fanarenana voaova amin'ny Samsung Galaxy S3 Mini.
Ahoana ny fametrahana ny fanarenana sy ny root amin'ny Samsung Galaxy S2 Hercules T989
Fampianarana hatao root sy fanarenana fanarenana amin'ny modely Samsung Galaxy S2 Hercules T989.
Fampianarana tsotra tsikelikely hanongotra sy hamelomana ny Samsung Galaxy S3 miaraka amin'ny kinova Android 4.1.2
Fampianarana tsikelikely hahitanao mora ny Unlock, Root ary Recovery amin'ny Google Nexus 4
Tutorial tsotra tsikelikely hanongotra sy hametahana ny fanarenana na fanarenana ClockworkMod novaina amin'ny LG L3 E400
Samsung Galaxy S, fomba iray hafa hametrahana ClockworkMod Recovery
Fomba iray hafa hametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy S nefa tsy mampiasa Odin
Samsung Galaxy SIII: Ahoana ny fomba hamehezana sy fanarenana amin'ny dingana iray
Fampianarana tsotra hanaovana ny fotony sy ny fanarenana ny Samsung Galaxy SIII amin'ny dingana iray
RecoverX, apetraho mora foana ny sitrana amin'ny terminal Xperia
Fampianarana hametrahana ny fanarenana nohavaozina amina faran'ny terminal an'ny laharana Sony Ericsson Xperia miaraka amin'ny RecoverX
Ahoana ny fametrahana ClockWorkMod Recovery amin'ny LG Optimus 3D
Fampianarana tsotra misy ny fitaovana rehetra, amin'ny fomba fametrahana ClockWorkMod Recovery amin'ny LG Optimus 3D.
Ahoana ny fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy Tab p1000n
Samsung Galaxy S 3, ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny dingana iray
Fampianarana tsotra hametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy S 3 amin'ny alàlan'ny odin 3.04
Ahoana ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod fanarenana amin'ny tab Samsung Galaxy p1000
Fampianarana iray isaky ny dingana miaraka amin'ny sary hanonganana sy hametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Samsung Galaxy Tab, maodely p1000
Fampianarana iray isaky ny dingana amin'ny fametrahana ny fanarenana amin'ny Samsung Galaxy R na fantatra koa amin'ny hoe GT-i9103
Ahoana ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery amin'ny Huawei u8650, lesona iray isaky ny dingana miaraka amin'ny sary.
Huawei u8110, ny fomba famongorana sy fametrahana ClockworkMod Recovery
Fampianarana azo ampiharina hametrahana ClockworkMod Recovery ary hamaka ny Huawei u8110, ao anatin'izany ireo fitaovana ilaina rehetra.
FITSIDIHANA AMON-RA 1.5 ho an'ny HTC DREAM SY HTC MAGIC
Amon-Ra dia nandefa ny kinova vaovao momba ny fanarenana lehibe ho an'ny terminal htc Dream sy htc Magic.
Mametraka fanarenana vaovao amin'ny ANDROID
Heveriko fa saika isika rehetra dia efa nandre izany momba ny fomba fanarenana, ny fanindriana ny ALT + s, ny famafana sns ... Hanazava zavatra vitsivitsy isika ary hametraka ny hafa